Cuntada Farta Giriigga ee ugu Fiican - Uruurinta Qorista
Makhaayadaha & Cuntada fudud Geedka Giriigta
Cuntada Farta Giriigga ee ugu xiisaha badan
Giriigtu waxay jecel yihiin in ay fariistaan ​​miiska miisaska yaryar ee cuntooyinka delicious, oo la wadaagaya cuntada iyo shirkad wanaagsan. Waa kuwan qaar ka mid ah suxuunta ugu wanaagsan ee aan u baahnayn maacuun. Kaliya qaado oo raaxayso!
Lagu qoray liis gareynta xarfaha.
Cocktail Lamb Kebabs - Souvlakia Arnisiya
Souvlakia, chunks ee hilibka on skewers yar, waa raaxo ah ee Giriigga, iyo version this wata waa macaan dhadhan fiican leh in ay raacaan jinniyo ama khamriga pre-cashada. Cuntadani waxay ku baaqeysaa saddex maalmood oo marin ah iyo karinta maalinta afaraad, markaa sii qorshee. Natiijada dhammaadka waa u qalantaa.
Kookaha Hilibka Qufaca - Keftethakia
Sawirada Tetra / Sawirada Goals
Keftethakia waa saxan jecel oo si sahlan loo sameeyo. Caadi ahaan waxaan ka samaysanayaa kooxo waaweyn oo hilib ah, waxaanay u isticmaalaan qaar ka mid ah meeraha loo yaqaan 'kokteyl', iyo kuwa kale ee loo yaqaan 'hamburger patties' ama 'meatballs' ee suugada.
Doonaa Picarel ama Smelt - Marithes
Marithes waa yar yaryar ama nacnac oo la isku shiilay oo dhanna waxay u adeegeen liibaan. Waxay sameeyaan maraqa qurxoon ee quruxda badan, sababtoo ah way yar yahiin, waxay cunaan cunto fara badan.
Roodhaf la dubay Tomatoes & Feta - Riganatha
Roodhada la kariyey waxay ku daboolan yihiin saliid saytuun ah oo bikrad ah oo dheellitiran , yaanyada, jiiska , iyo lakabka caafimaad leh ee oregano. Quruxda Giriigga ah ee caadiga ah, sida ugu wanaagsan ee macmacaan ah, iyo weyn oo leh biir.
Spinach Pie leh Feta Cheese - Spanakotyropita
Cunto isbinaajid ah ayaa ah jacaylka Giriigga waxaana loo samayn karaa siyaabo badan. Cuntadani waxaa ka mid ah maareynta phyllo fudud oo isticmaala cajiinka ganacsi ahaan loo diyaariyey phyllo.
Dufan Cagaar ah - Dolmathes (Dolmades)
Caleemaha sabiibka ah ee caleenta ah waa cuntooyinka ugu fiican iyo macaan, iyo mid ka mid ah kuwa ugu caansan ee dhammaan cuntooyinka Giriigga . Noocaan waxaa la sameeyey bariis iyo caleemo, laakiin waxaa jira dhowr nooc oo doorasho ah. Kuwani marwalba waa kuwa ugu caansan xafladaha waxayna si fiican u qiimeeyaan wakhtiga ay qaadato si ay u sameeyaan!
Top 10 10 Cunto fudud oo fudud Giriig ah
Recepted Recipe Red Peppers (Pipers Ps)
Cuntada lagu qurxiyo saliida iyo saliidda Vinegar Giriigga
Sykotakia Tiganita: Dufanka yar yar ee xumaada beerka
Suugo fudud oo ku jirta Suugo Mushta ah
Isugeynta Pie iyo Cocktails
Maxaad u Vegans jeceshahay Hummus (oo Adigu Tijaabinayso)
Top 11 Qodobka ugu Caansan Macaroni iyo Cheese
7 Ku-noqoshada Iskuulka Cuntada
Cannaanka Casiirka ah ee "Fruit and Nut"
Macmacaanka macaan ee Sulfphire Collins Recipe Spring Cocktail
Cuntada fudud ee la cabo bakeeriga 'Paté Recipe'
Ruxin iyo walaaqo: Sida loo Isku qaso Cocktails Best
Suugo macaan iyo dhoobo ah Dumarka laba hab
Cadaan cad oo leh qiiqa Ham Shank
Cake Strawberry Fresh
Qaado Nuts with Macadamias
Bakteeriyada Mucaarad ee Low-Fat
Shukulaatada Espresso Fudge Cake Recipe by Marcel Desaulniers
Beddelaadaha Halka, Talooyin, iyo Talooyin